ကငျဂြုံအနျ ပြောကျဆုံးနမှေုကို ကငျရဲ့အရငျးနီးဆုံးလူ ဒနျးနဈရော့ဒျမနျးရဲ့ ဝနျခံခကျြ - Bamakhit
Home နိုငျငံတကာသတငျး ကငျဂြုံအနျ ပြောကျဆုံးနမှေုကို ကငျရဲ့အရငျးနီးဆုံးလူ ဒနျးနဈရော့ဒျမနျးရဲ့ ဝနျခံခကျြ
နောကျပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျကပဲ ဘယျသူမှ မတို့ရဲမထိရဲတဲ့ မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ ဧရာမပနျးခြီကားတှကေို ပွညျသူရငျပွငျကနေ ဖွုတျခလြိုကျပါတယျ။ ဒါက အခကျြတဈခုပါ။
ရော့ဒျမနျးက သတငျးမီဒီယာမြားနဲ့ တှဆေုံ့စဉျမှာ ” နိုငျငံပိုငျရုပျသံတှမှော သူ့ညီမကိုပဲ ဆကျတိုကျတှနေ့ရေခြိနျ … ခငျဗြားစိတျထဲမှာ တဈခုခုတော့ မှားနပွေီလို့ တှေးနမှောပါ … သူမဟာ တောငျကိုရီးယားကို သူ့အရငျက သှားခဲ့တယျ ….
နောကျမှ သူက လိုကျသှားတာကို ခငျဗြားတို့ မှတျမိနမေယျထငျပါတယျ … ဒါက သူမရဲ့ အရေးပါမှုပါ … ဒါပမေယျ့ အခု သူ အဆငျပွလေား မပွဘေူးလား တထဈခြ မပွောနိုငျသေးပါဘူး …
သခြောတာကတော့ ကငျယိုဂြောငျက နိုငျငံပိုငျသတငျးစာမကျြနှာတှထေကျမှာ နရောယူနတောကို ကွညျ့ရရငျ သူမဟာ ဆကျခံမယျ့သူဆိုတာတော့ ပွောနိုငျပါတယျ “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
For Zawgyi မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဟာ မေလ(၁)ရက် အလုပ်သမားနေ့မှာ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ သူ သေဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဗွီဒီယိုမှာလည်း အငြင်းပွားစရာ အချက်တွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ယခင်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုအဟောင်းလို့ ဆိုနေသူတွေ ရှိသလို၊ ကင်ရဲ့ Body double (ရုပ်ချင်းတူသူကို သုံးထားတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က သတင်းတွေကတော့ ကင်ဟာ ကိုဗစ်ကို ရှောင်ဖို့ သီးခြားနေထိုင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကင်ဟာ ဧပြီ(၁၁)ရက်နောက်ပိုင်းကတည်းက ပျောက်နေခဲ့ပြီး၊ မေလ(၁)ရက်နေ့ လူမြင်ကွင်း ပြန်ထွက်လာခဲ့တာသာ ယခင်က ဗွီဒိယိုဖိုင်အဟောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အများထင်နေသလို Body double သာ ဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ အခုအချိန်ထိ ကင်ဟာ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတာ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။
ကင်နဲ့ အလွန်ရင်းနီးတဲ့ ဒန်းနစ်ရော့ဒ်မန်းကတော့ မိတ်ဆွေကြီး ကင်ဂျုံအန် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ခံမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒန်းနစ်ရော့ဒ်မန်းဆိုတာ အမေရိကန် ဂန္ထဝင် ဘက်စကတ်ဘောသမားကြီးပါ။ ကင်ကလည်း အလွန်ခင်မင်သူဖြစ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားကို ဝင်ချင်တိုင်းဝင် ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ရတဲ့ ရှားရှားပါးပါး အမေရိကန်သားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်နဲ့လည်း အဆက်အသွယ် မပြတ်သူပါ။ မကြာခဏ ကင်နဲ့ တွေ့ဆုံလေ့လည်း ရှိပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာတော့ ရော့ဒ်မန်းကိုယ်တိုင်က ကင်ကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရုပ်သံမြင်ကွင်းမှာ ကင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်ကပဲ အစိုးရအခမ်းအနားတွေကို ဦးဆောင်တက်ရောက်နေတဲ့ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့လို့ ရော့ဒ်မန်းအနေနဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ကင်အတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာစေခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ ဘယ်သူမှ မတို့ရဲမထိရဲတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဧရာမပန်းချီကားတွေကို ပြည်သူရင်ပြင်ကနေ ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါက အချက်တစ်ခုပါ။ ရော့ဒ်မန်းက သတင်းမီဒီယာများနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ” နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံတွေမှာ သူ့ညီမကိုပဲ ဆက်တိုက်တွေ့နေရချိန် …
ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ တွေးနေမှာပါ … သူမဟာ တောင်ကိုရီးယားကို သူ့အရင်က သွားခဲ့တယ် …. နောက်မှ သူက လိုက်သွားတာကို ခင်ဗျားတို့ မှတ်မိနေမယ်ထင်ပါတယ် … ဒါက သူမရဲ့ အရေးပါမှုပါ … ဒါပေမယ့် အခု သူ အဆင်ပြေလား မပြေဘူးလား တထစ်ချ မပြောနိုင်သေးပါဘူး …
သေချာတာကတော့ ကင်ယိုဂျောင်က နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမျက်နှာတွေထက်မှာ နေရာယူနေတာကို ကြည့်ရရင် သူမဟာ ဆက်ခံမယ့်သူဆိုတာတော့ ပြောနိုင်ပါတယ် “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကင်ယိုဂျောင်ဟာ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကင်ဂျုံအန်ရဲ့နေရာကို ဆက်ခံမယ့်သူ ဖြစ်လာဖို့ရှိပြီး၊ မကြာသေးခင်ကမှ အစ်ကိုဖြစ်သူက သူမကို ပါတီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ရာထူးကို တိုးပေးခဲ့သလို၊ နိုင်ငံရေးရာတွေမှာ ဒုတိယသြဇာအကြီးဆုံးအဖြစ် ပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
Previous articleပါကစ်စတနျ လယောဉျပကျြကမြှု ၂ ဦးအသကျရှငျ၊ ၉၇ ဦး သဆေုံး
Next articleဘေးထိုငျဘုပွောနမေယျ့အစား တညျ့တညျ့ထိုငျ အမှနျပွောပွီး လကျတှလေု့ပျတာ ပိုကောငျးလိမျ့မယျ – ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျး